7 Matekiniki Ekuwedzera Yako Mahoridhe Kutenga Kutengesa | Martech Zone
Isu takapa toni yeruzivo pakutanga nhasi Kutengesa kweHoridhe nemisi yakabatana, fungidziro uye huwandu, ikozvino isu tinoda kugovana infographic yekuti iwe ungatora sei mukana weaya maitiro ekuwedzera iwe online kutendeuka panguva yezororo.
Ndiyo nguva yegore zvakare! Iko kuzorora kunotenga frenzy kuri kuda kutanga. ShortStack yakakomberedza boka rezviverengero (25!) nezvemaitiro ekutenga, uyezve akawedzera mashoma mazano eMisangano ayo achakubatsira kubatana nevamwe vevateveri vako nevateveri mumasvondo mashoma anotevera.
Pachine nguva yakawanda yekuwana zvipo pasuo saka ino ndiyo nguva yekupa mushandirapamwe kutakurirwa mahara!
Unoda kuchengetedza mutengo wekutumira? Zvakadii nezvekupa mutero kune vatengi vanoda nhonga kutenga kwavo kuchitoro chako?
Govera kukwidziridzwa kuburikidza nesocial media iyo inokwezva nharaunda yako ku Nyorera kuburikidza neemail saka unogona kusundira zvinopihwa mumwaka wese.
Iye zvino zvawave nemaemail iwayo, ronga kunze an kupa zuva mumwaka wese wezororo.
Tora iko showroomers uye upe mobile-chete mupiro kuti uchengete kutenga mukati mechitoro chako!
Kutaura nezve nhare, ive shuwa yekuendesa nhare-yakagadzirira coupon. Kutumira mameseji makirabhu ichiri nzira huru yekusundira zvidzikiso kune vatengi vako, tanga imwe uye upe mamwe makoni mumazororo ese.
Tora mukana wemwaka wekutenga uye tanga yakareba-nguva sweepstakes kune vako vanyoreri email kuitira kuti vagare vakanyoresa uye vachishanda pane yekupa maemail auri kutumira kunze.
Tags: kukanganisakutakurirwa maharakutengesa zororokutenga zororokunatsiridza kutengesakuwedzera kutengesanharembozhambozha chipirisokupa zuvaonline shoppingkunhonga discountsshowroomingsweepstakes